Nepal Mamila | यस्तो छ एनआरएनए स्पेनको समावेशी समूह: निर्वाचनमा को कसको विरुद्द लड्दैछन् त? - Nepal Mamila यस्तो छ एनआरएनए स्पेनको समावेशी समूह: निर्वाचनमा को कसको विरुद्द लड्दैछन् त? - Nepal Mamila
# माओवादी क्रान्तिकारी
यस्तो छ एनआरएनए स्पेनको समावेशी समूह: निर्वाचनमा को कसको विरुद्द लड्दैछन् त?
२०७८ असार २५
लण्डन – राईट नेपाल, बार्सिलोना, जुलाई ८ । एनआरएनए स्पेनको नयाँ नेतृत्वको लागि उत्तरकुमार राई र शालिकराम डुम्रे चुनावी मैदानमा ऊत्रिएका छन्। अध्यक्ष पदका लागि राई र डुम्रेले बिहिवार बार्सिलोनामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको हो।
म्याड्रिड निवासी राई संघको बर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन् भने बार्सिलोना निवासी डुम्रे कार्यसमितिका सदस्य हुन्।आगामी जुलाई २५ मा हुने एनआरएनए स्पेनको सातौ अधिबेशनमा लागि बिभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। यस्तै दुई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य (आईसीसी) पदका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ।दिनेश कुमार गिरी,प्रकाश तिमिल्सिना र यज्ञ नारायण पौडेलले (रमेश) उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। गिरी वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन्। यसअघि उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताउदै आएका थिए। तिमिल्सिना छैटौँ अधिवेशनमा पनि आईसीसीका प्रत्यासी थिए।यस्तै पौडेल बर्तमान कार्यसमितिकै सल्लाहकार हुन्। दुई हजारभन्दा बढी पंजीकृत सदस्य भएकाले एनआरएनए स्पेनमा दुईजना आईसीसी सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
अन्य कुन – कुन पदमा कसले दिए उम्मेदवारी ? यस्तै खुल्ला उपाध्यक्ष तर्फको दुई पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कृष्णराम रानाभाट, भुप्रेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र सोनु राउतको खुल्ला उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। महिला उपाध्यक्षमा कमला बराल र सृजना लामिछाने, क्षेत्रीय कोटाको उपाध्यक्षमा रोशन पाठक र महेश्वर घिमिरे (भान्जा) चुनावी मैदानमा ऊत्रिएका छन्। महासचिवमा बिदुर गौतम र ध्रुव भट्ट र दुई सचिवमा(खुल्ला तर्फ) अरुण घिमिरे, केबिन्द्र शाही (के.बी.) र नारायण भट्टराई (एन.के) बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुनेभएको छ। कोषाध्यक्षमा सन्त बहादुर क्षेत्री र शिव प्रसाद गौतम, युवा संयोजकका लागि दिपेन्द्र गजुरेल र मनुश जंग खड्काबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
सहकोषाध्यक्षमा शिवप्रसाद पौडेल र महिला संयोजकमा देवी कुमारी भण्डारी, क्षेत्रगत सचिवमा पाइसभास्कोबाट दिपेन्द्र प्रकाश अर्याल, ग्रान कानरियाबाट दिपेन्द्र श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन्। तर म्याड्रिड क्षेत्रबाट सचिव पदका लागि सुन्दरी लामा र मनिषा गुरुङ भिड्दै छन्। कोष्ट़ाब्याङ्का क्षेत्रबाट भने १ जना सचिव पछि मनोनित गरिने संघको निर्वाचन नियामवलीमा उल्लेख छ।
५ खुल्ला सदस्यका लागि ७ जना भिड्दै :
एनआरएन स्पेनको ५ जना खुल्ला सदस्य पदका लागि ७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सदस्यमा इमा सापकोटा भट्ट,कमल पराजुली,जमुना देवी शर्मा, जित बहादुर माल (कुमाल), दीपक परियार,प्रकाश पुरी र डिल बहादुर थापा रहेका छन्। खुल्लातर्फबाट ५ जना, प्रत्येक क्षेत्रीय समितिबाट एक-एक जना गरी ४ जना र मनोनित सदस्य ४ जना गरी १३ जना सदस्यहरु रहने संघको निर्वाचन नियामवलीमा उल्लेख गरिएको छ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन जुलाई १२ मा र निर्वाचन जुलाई २६ मा तोकिएको छ।संघले विद्युतीय मतदान गराउने बताउदै आएपनि मतदान प्रणाली र नतिजा प्रकाशनबारेको ठोस जानकारीसहितको विवरण निर्वाचन समितिले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
एनआरएनए स्पेनमा २ हजार २० जना पंजीकृत सदस्यहरु रहेका छन्। यिनै सदस्यहरुले संघको नयाँ नेतृत्व चुन्नेछन्।
डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न अर्थ मंत्री शर्माले गरे आग्रह
एनआरएनहरुका लागि डलर एकाउंटबारे सोमबार उच्चस्तरीय कार्यक्रम हुँदै
एनआरएनए अष्ट्रियाले यसरी क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनायो
सञ्जय तुम्बाहाङ्फेको कवितासङ्ग्रह ‘सृष्टिको याङदाङ’ लोकार्पण
कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतका सेवा कटौती
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण: माघ दोस्रो साता कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ
विवाह, ब्रतबन्धलगायतमा ५० जनासम्म उपस्थित हुन पाउने
झण्डै ३०० अंकको बृद्धिपछि नेप्सेमा १० अंकको करेक्सन
पान्थर समाज सेवा युकेको अध्यक्षमा कैलाश काम्बाङ निर्वाचित
कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
एमालेका ६३ जिल्लामा अधिवेसन, १४ जिल्ला बाँकी (सूचीसहित)